Waxun dia ao amin'ny tanànan'ny Elektrika-Yueqing any Shina, faritanin'i Zhejiang. Izahay no mpanamboatra mamokatra indrindrany elektrikaal fittings, tariby kojakoja, Fitaovana elektrika avo lenta sy ambany ary feno herinaratra, boaty fizarana, famolavolana bobongolo ary famolavolana, Toy ny ny Clamp misy fihenjanana, clamp PG, clamp fanindronana insulation, tariby sy mpampitohy tariby, mpampitohy splice mandeha ho azy sy kojakoja hafa tariby. Ny orinasanay dia nankafy laza avo lenta tamin'io indostria io ihany miaraka amin'ny habetsany, ny vidiny mirary ary ny trosa tsara, manao ny annovation amin'ny fitantanana sy ny haitao.
Ny orinasa dia nahazo fidirana amin'ny tambajotram-panjakana sy ny vatan'ny atsimo, miaraka amin'ny rafitra fitantanana famokarana ary ny rafitra fitantanana feno izay afaka mamolavola sy mamokatra ny vokatra sy ny bobongolo, ary mandalo fitsapana kalitao ISO9001. Ny orinasanay dia nanondrana ny vokatra ho any atsimo Azia Atsinanana, Eropa, Etazonia, Afrika ary firenena hafa manerana an'izao tontolo izao. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasantsika dia mahazo laza tsara ao an-trano sy any ivelany. Tongasoa eto hifandray aminay.
Miezaha ho tonga mpitarika amin'ny indostrian'ny fittings ao Shina
Dian-tongotry ny orinasa
Ny traikefa amin'ny indostria
Miaraka amin'ny kalitao voalohany, serivisy kilasy voalohany, lazan'ny kilasy voalohany ary mpanjifa hiara-hiasa hamorona drafitra lehibe
Asa fitoriana eo amin'ny orinasa
Omeo fiadanan-tsaina ho an'ny fampandrosoana herinaratra amin'ny safidy voalohany
Vina amin'ny orinasa
Maxun dia natsangana tamin'ny taona 2011. Mpanamboatra matihanina an-trano voalohany amin'ny fametahana herinaratra elektrika sy kojakoja fampiasa amin'ny tariby izy io.
Miaraka amin'ny fotodrafitrasa fanodinana milina mandroso iraisam-pirenena sy ny ekipa injeniera efa za-draharaha, Yongjiu dia mahavita mamokatra vokatra isan-karazany ary manome serivisy fanao hanaraka fenitra isam-paritra amin'ny firenena samihafa.
Maxun dia manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana sy marketing amin'ny tariby lug & mpampitohy tariby, fantsom-pifandraisana, (Copper, aliminiana ary vy), kojakoja fampiasa amin'ny tariby, vokatra plastika, arrester jiro ary insulator miaraka amina kalitao ekena mifanaraka amin'ny ISO9001.
Mampifantoka ny saina amin'ny fanavaozana, namokatra vokatra an-jatony ny orinasanay.
Maxun dia mifantoka amin'ny mpanjifa ary manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana ireo vahaolana mety indrindra mifototra amin'ny takiana samihafa amin'ny tsena tsirairay.
Maxun dia nanangana tambajotra serivisy marketing matotra any amin'ny firenena sy faritra 70 manerantany.